Isikhokelo sePenciloni eziMnandi kakhulu
Ukuzilibazisa kunye Nemisebenzi IiNkonzo zobuGcisa
by UHelen South
I-Smooth, Wax, i-Soft, Inzima, iCrisp, okanye i-Blendable
Ukufumana iipencilisi ezinemibala enhle ngumcimbi wokhetho lomntu kunye nomsebenzi okhoyo. Ezinye iipensile zincinci, zibeka iindawo ezigqithisileyo ze-opaque kunye nezobugcisa obuninzi; Ezinye zinzima kwaye zilungele ukudweba ngokubanzi. Ezinye zifanelekile kwiimilinganiselo ezahlukeneyo zamaphepha, ezinye zibonisa ukuba umculi ukhetha ukudweba njani, ngeendlela ezilodwa okanye ezininzi, kunye noxinzelelo olunzima okanye olunzima. Iintlobo ezahlukeneyo ziyinkxalabo, ngoko nantsi isikhokelo kwizinto ezibonakalayo kunye ezikhoyo, ezichaza iimpawu zazo.
I-Wax, i-Oli, okanye i-Water Based Based?
Abakhiqizi abahlukeneyo basebenzisa izibophelelo ezahlukeneyo ukuzisa iigigments zibe yindlela efanelekileyo, kwaye isithintelo ngasinye sinempembelelo ekusebenziseni ipensile. Iipencilisi ezisekelwe kwi-Wax zincinci kunamanzi okanye ezisekelwe kwioli, ngoko zinika uncedo olungcono kwiphepha kwaye umbala unzima kakhulu. Nangona kunjalo, baphula ngokulula kwaye banxiba ngokukhawuleza, kwaye ukuba ubeka umbala kumbala kakhulu, unokuhlakulela i-wax bloom, ingubo yecala elenziwe ngamapulati elichaphazela ukuqina.
Amafutha e-oyile-based (ngokuqhelekileyo i-oyile yemifuno) ngokubanzi kunzima kunokuba i-wax-based based, ngoko ihlala ixesha elide kwaye ayinako ukuphuka. Kufuneka usebenzise i-pigment eyengeziwe ukuze ufumane ubunzima obuvela kwi ipensela esekelwe kwi-wax. Ekugqibeleni, amapensele asekelwe kumanzi azinzileyo, kodwa ungayisebenzisa emanzi okanye eyomileyo, evumela ukulawula okungcono ukwakhiwa.
I-soft okanye i-Hard, i-Student okanye iNgcali?
Khetha ipencil elula xa ufuna i-stroke ephasayo kunye nemibala ecwebileyo; ezinzima kunokuba zibhekiselele kodwa zingenanto yokugubungela iindawo ezinkulu.
Ngokuqhelekileyo abavelisi baya kwenza amabini amapensele, elinye labafundi, elinye labaqeqeshi. Kukho umehluko omkhulu kumanani - ipencilisi yabafundi bebakala abahlala bebiza kakhulu - kodwa ngokubanzi, kunye neenguqu zezifundo zabafundi, ufumana i-pigment ephantsi ukuze ulinganise umlinganiselo, kwaye kufuneka usebenzise enye yayo ukuze ufumane umbala ofanayo.
I-Classic: i-Faber-Castell Polychromos
Ukuba ukhangele ipensela enemibala ethembekileyo eya kusebenza kuyo nayiphina iphrojekthi, khangela akukho ngaphezu kwe-Faber-Castell Polychromos, eyintandokazi ephakamileyo yabafundi besikolo sobugcisa kunye nabaqeqeshi. Ukubiza nge-$ 40 kwiipensele ezili-12, ezi zibonakala ngathi zinotyalo-mali olukhulu, kodwa zixabiseke kakhulu. Ezi ipensele zithe tye ngokwaneleyo ukuba zibekwe kakuhle, ngaphandle kokugubha, iingubo ziluhlaza kwaye zihlaziyeke, kwaye ukugxininisa nokuxhomekeka. Kaninzi "
Kwabaqalayo: I-Prismacolor yeNkulumbuso yeePencil
Olunye udidi lweklasi lobugcisa, iipencilori zePrismacolor zilula ukuluhlu kwaye zidibanise, zilungiswe kakuhle, kwaye ziphelile ngokugqibeleleyo ezingabonakali zomile okanye zinyame. Ezinye iiprismacolor hues zinokungaqiniseki ngokungaqiniseki kwaye zingaphela ixesha, kodwa kumculi oqalayo okanye umfundi, la mapensisi axabiseke kakhulu. Kaninzi "
Ngenkcukacha: I-Derwent Studio IiPenciloni eziMbala
I-Derwent Studio ngumzala we-Derwent Artist range, unikezela ipencil egciniweyo, ekhunileyo ehambisa umgca ogqithisileyo kunye nokuphathwa ngokuchanekileyo kunamaphepha epenseli eMenzi. Le nto iyintandokazi kunye nabaculi abaninzi abakhetha ukhetho oluxakekayo, oluxakekileyo lwe-Derwent kunye nokuphathwa kwabo okunamandla. Kaninzi "
Ukubumba kunye nokuShayela: i-Faber-Castell Albrecht Dürer Watercolor ipensela
Amapensele angenawo amanzi angenakho ukukhuseleka okungenawo amanzi apho ipencil enemibala enemibala, kodwa ngokubeka imibala enemibala emihle, ukuphatha kakuhle, ukudibanisa, kwaye ngokuqinisekileyo, ukusebenza kakuhle ngamanzi, awukwazi ukufumana ngcono sixhobo sePeler-Castell sika-Albrecht Dürer ipencil. Kaninzi "
Ukukhanya: uCaran d'Ache Amapensele aMbala
I-Caran d'Ache Iipencilisi ezinemibala ekhanyayo inezinye izilinganiso eziphezulu zokukhanya , oku kuthetha ukuba umbala wabo oqaqambileyo awuyi kupheka ngokukhawuleza ngexesha elide njengamanye amaxabiso. Ezi ipensela zinokuqulunqwa kwe-axy ezenza ukuba zive ngathi zincinci kwaye zitshitshwe kwiphepha kodwa zivumela ukuba zilahlwe ngokungafani ne-pastel yeoli. Amatriki amaninzi awasebenzisa ngokubambisana nelinye uhlobo lwepenciliti enemibala, usebenzisa ipenseli encane engaphantsi kwemibala yomzobo kwaye usebenzisa iCarna d'Ache kwiimpawu zokugqibela ukuze ungeze i-splash yombala oqaqambileyo. Kaninzi "
Kwabantwana: Ubungqina bemibala yePencil
Ukuba umculi wakho ogqithisileyo uphumelele eCrayola, vumela umntwana wakho ukuba athathe umbala kwinqanaba elilandelayo kunye nesethi yepencil ye-Imaginesty. Ezi pencils zilula ukuyisebenzisa, ezingenayo isetyhi, kunye nobungakanani-mali, ezibiza i-$ 20 malunga neefowuni ezingama-48. Kaninzi "
I-Vibrancy: I-Staedtler Ergosoft i-Pencil ye-Color Cinning
Iipencilisi ze-Staedtler zifana nomgangatho kwi-Prismacolor ne-Faber-Castell. Ziyingozi kwaye zihlala zizinzile, kwaye umgangatho wokukhokela uphezulu-kodwa ixabiso ngokuqhelekileyo liphezulu kwisithathu.
Yiyiphi ipensela endiyisebenzisayo yokuShading?
Sebenzisa i-Eraser Shield ukudweba i-Sharp Corners
Iintlobo zeePhepha zoBugcisa
I-Charcoal Top nePhepha
Khetha i-Charcoal Best for Drawing yakho
Ukuphononongwa kweeMpawu eziPhambili zeDray Drawing Ink
Liliphi iphepheni endiyisebenzisayo yokukhethwa kwePensela?
Ukukhetha, Ukusebenzisa nokugcina iiNibs zePop Pens
Ngaphambi kokuba Uthenge iipenciliti zeGrayphite
I-Profile ye-Neil deGrasse iTyson
¿Cómo saber si se tiene e-mail de deportación en Estados Unidos?
6 Izinyathelo Ezinkulu Zokuguquka Unokukunceda Ukuba Uxolele
Iphrofayili yoMbulali oyisiXhosa uRudney Alcala
Iziganeko eziphambili kwi-Scramble ye-Afrika
Ingakanani Umzimba Wakho Unamanzi?
Izihloko ze-Sam Shepard Udlala: 'IWest West,' 'Child Burial' kunye nabanye
Singabantu # 2! I-Horror Movie Sequels (ngokuqinisekileyo) ilungile kunabakuqala
3 Amasebe kaRhulumente kwiRiphabhuliki yaseRoma
Izinto Ezaziyo Ngaphambi Kokuthenga I-Cello
8 Iingxabano ezinkulu zeNtsana
Yakha i-Best ye-LEGO Architecture Series Kits
Iimfundiso zeBhayibhile kwiinkcubeko ezahlukeneyo
Funda Okunye Ngomlando Omnyama kunye neJamani
Imbali kunye nokuSasazeka kweMerengue
Amanqaku okuSebenza anomdla
AmaPhulo okuQala aseGrike amaxesha okubhala
Imiphumo ye-Viagra kwiBasetyhini kunye nobulili besini
Okokuzikhethela ngokuzithandela kwindlela yokusebenzisa i-deportación
Ulwazi olubalulekileyo malunga neRamadan, inyanga ye-Islamic Holy
Iindidi zoMbane kunye noTshintsho loMbane